पढ्नुहोस्, ‘घामड शेरे’ को समीक्षा - मनोरञ्जन - नेपाल
‘घुस हैन, यहाँ (मालपोत) को रीत हो ।’
जग्गा नामसारीको सबै प्रक्रिया पुर्‍याउँदा पनि अनेक झमेला भोग्नुपर्ने, त्यसबाट मुक्ति पाउन मालपोतका हाकिमलाई दाम चढाउनुपर्ने हाम्रो कठोर नियति हो । फिल्म घामड शेरेमा यसैलाई प्रतिबिम्वित गरिएको छ र माथिको संवाद बोल्ने पात्र अरु होइनन्, स्थानीय नेता हुन् । धेरथोर मात्र हो, मालपोतझैँ हरेक सरकारी निकाय घुसको भाइरसले ग्रस्त छन्, जानेबुझेकै भनिएकाहरुबाट संरक्षण र स्वीकार भएपछि निमुखाहरुको के जोर चल्नु ? हाम्रो राज्य प्रणालीका यिनै उल्झनलाई घामड शेरेमा बुनिएको छ । समाज र भुइँमान्छेको भोगाइबाट सिनेमा टाढा भइरहेको आरोपलाई यसले थोरै चिर्न खोजेको छ तर समस्या के भने विषयको गाम्भीर्य अनुरुप प्रस्तुति विश्वसनीय छैन । यो फिल्मको निर्देशक तथा पटकथाकार हुन्, हेमराज बिसी ।
हामीकहाँ कमेडी फिल्मको अप्राकृतिक लहर छ । फिल्ममेकर नवीन कथा भन्न होइन, जसरी पनि दर्शक हँसाउन मरिहत्ते गर्दै छन् । घामड शेरे पनि मूलत: कमेडी फिल्म नै हो तर यसले हँसाउने चक्करमा कथा, पात्र र प्रवृत्तिमाथि मजाक गरेको छैन । मूर्त नहोला तर धेरै हदसम्म इमानदार प्रयास देखिन्छ, निर्देशकको । जहाँ खोलाले जग्गा बगाएपछि मूल पात्रले खोलालाई नै मुद्दा हाल्छ ।
तरकारी खेती गर्ने उद्देश्य बोकेर स्वदेश फर्किएका छन्, शेरबहादुर । जग्गा किन्छन् । तरकारी लगाउँछन् तर त्यही साल बाढीले खेतलाई बगर बनाउँछ । बुझ्दै जाँदा त पहिल्यै बगर बनेको जग्गामा माटो थपेर उनलाई बेचिएको हुन्छ । जग्गा बेच्नेविरुद्ध प्रहरीकहाँ रिपोर्ट गर्छन् तर माखो मर्दैन । केही सीप नलागेपछि स्थानीय निकायको न्यायिक समितिमा खोलाविरुद्ध मुद्दा दिन्छन् । उनको डुबेको रकम खोलाबाट असुलउपर होला ? यो लफडासँगै शेरबहादुरको वैवाहिक जीवनको उतारचढावमा केन्द्रित छ, फिल्म । क्लाइमेक्स अनुमान अनुरुप नै भए पनि रोचक लाग्छ ।
पाइला–पाइलामा ठगिन विवश हुने नेपालीको प्रतिनिधि हो, शेरबहादुर । ठगिएको थाहा पाएर विरोध गरे पनि अन्तिममा ठगिनै पर्छ, अरु विकल्पै हुन्न । पहिलो दृश्यबाटै शेरबहादुरको घामड चरित्रको झल्को पाइन्छ, त्यसको केही बेरमै फिल्म मूलकथामा प्रवेश हुन्छ तर खेत खोलाले बगाउँदै छ, शेरबहादुर साली गौरी (स्वस्तिमा खड्का) को सान्निध्यमा छ भन्ने छनक सहजै पाइने भएकाले कथाविकासमै पैदा हुनुपर्ने रोचकतामा कट्टी हुन्छ । त्यही बेला साली–भेनाको चक्कर र शेरबहादुरकी पत्नी पार्वती (सुष्मा निरौला) को कचकच थपिन्छ, जसले मूलकथाको बहाब बिथोल्छ । पति घर छिर्न नपाउँदै फेरि विदेश जानुपर्छ भनेर पार्वती कुर्लिएको दृश्य बिझाउँछ । उनीहरुको सानो छोराको चरित्रचित्रण अतिरञ्जित छ । द्वन्द्वको निर्माणका लागि सिर्जिएका घटनाक्रम अनुभूत नहुँदा वितृष्णा जाग्छ, घामड शेरेमा पटक–पटक यस्तो परिस्थिति सामना गर्नुपर्छ ।
देश संघीय प्रणालीमा गएपछि स्थानीय तहको अधिकार वृद्धि भएको छ तर न्याय वा सरकारी सुविधा उपभोगका मामलामा नागरिकको पहुँच समान छैन, बरु स्रोत साधनमा नेताहरुको हालीमुहाली छ, बाँडीचुँडी खान सिपालु छन् । नेपाली समाजको यो पछिल्लो परिदृश्य समेट्न निर्देशक बिसी सफल छन् । गुन्डा पाल्ने ठेकदार नेता, फरक पार्टीका मेयर–उपममेयरबीचको खिचातानी, स्थानीय सरकारका कर्मचारीलाई जनप्रतिनिधिको रुष्ट व्यवहार, कर्मचारीको घुस्याहा शैली, निमुखालाई उकासेर फाइदा लुट्ने कानुनी परामर्शदातादेखि प्राकृतिक प्रकोप पीडितप्रतिको राज्यको उदासिनतासम्म अटाएको छ । पात्रको भोगाइ, चालढाल र बातचितले बरोबर हसाउँछ तर त्यो जबर्जस्ती हुलिएको छैन, स्वाभाविक लाग्छ । ‘साली मन पर्‍यो...’ गीत कुठाउँमा घुसाइएको छ । सुन्दा रमाइलो लाग्ने यस गीतले कथाको गति अल्मल्याएको छ । बजारलाई रिझाउनेबाहेक यसको अर्को उपादेयता छैन ।
शेरबहादुरको वैवाहिक जीवनको संकटले मध्यान्तरपछि धेरै समय खाएको छ, जग्गा विवाद भुलेर पत्नी खोज्ने उपक्रम सुरु हुन्छ, निर्देशकमा चारैतिरबाट ठगिएको ‘बिचरो’ पात्र बनाउने लहड देखिन्छ । तर रक्सी पिउँदैमा पात्रको पीडाले दर्शकलाई छुँदैन, त्यसका लागि पहिल्यै पात्रप्रति प्रेम पैदा भएको हुनुपर्छ । यस मामलामा शेरबहारदुर फिक्का लाग्छ । बरु सालीसँगको सामीप्य मायालु पारामा देखाइएको छ । आमाले छोडेर जाँदा सानो छोरामा सुर्ता हुँदैन, न माइती पक्षकै केही भूमिका देखिन्छ, गौरीलाई सालीका रुपमा स्थापित गराउन संवादको सहारा लिइएको छ, दृश्य छैन । तर यी सब कुरालाई शेरबहादुरको निर्दोषपना र न्यायप्रतिको भोकले ढाक्छ । बरु उसलाई ‘हिरो’ बनाउने लहडमा गुन्डाको ग्याङलाई भकुरेको पच्दैन, त्यसमाथि फाइट सुरु हुनासाथ एक्कासि पानी पर्छ । पतिपत्नीको रासलीलाले आमाबुबाको निद्रा खल्बलिन्छ । यस्तो ‘क्लिसे’ हर्कतबाट नेपाली फिल्म कहिले मुक्त होला ?
प्राविधिक पक्षमा प्रशस्त हेलचेक्राइँ गरिएको छ । ध्वनिमा झनै समस्या छ । मध्यान्तरपछि साली–भेनाको प्रेम दर्शाउने र शेरबहादुरले पीडा पोख्ने उस्तै आशयका दृश्यहरु दोहोरिएका छन् । पात्रका हिसाबले शेरबहादुर अर्थात् निश्चल यो फिल्मको मेरुदण्ड हुन् । विडम्बना ! उनै कमसल छन् । लुटबाट निर्देशकको रुपमा वाहवाही कमाएपछि निश्चल अभिनयको रहर गरे तर पात्रलाई जीवन्तता दिलाउन यसअघिझैँ यसपटक पनि अनुत्तीर्ण भएका छन्, उनलाई पर्दामा देख्दा अभिनय नै गरिरहेको भान हुन्छ । मुख्य भूमिकामा देखिनु नै पात्र अभिनेताको सफलता हो र ?
स्वस्तिमाको उपस्थिति स्वाभाविक लाग्छ । हुलिया, हाउभाउ र बोल्ने शैलीमार्फत चरित्र आत्मसात् गरेकी छन् तर राष्ट्रिय अवार्ड जितिसकेकी अभिनेत्री यही स्तरका चरित्रमा रमाउनु प्रीतिकर हुन्न । छुच्ची पत्नीका रुपमा सुष्मा निरौला फिट छिन् । गौरी मल्लको लवजमा फेरबदल हुनु शोभनीय होइन । बरु बादल भट्ट, रोयदीप, लोकेन्द्र लेखकजस्ता सहायक कलाकारले तारिफयोग्य काम गरेका छन् । हेमराज बिसीका अघिल्ला फिल्मभन्दा कथाको प्रकृति र प्रस्तुतिमा घामड शेरे अलग छ । सम्भवत: यो उनको करिअरको उम्दा कोसेली हो तर सातौँ फिल्मसम्म आइपुग्दा पनि निर्देशकमा परिपक्वता देखिँदैन ।
फिल्म : घामड शेरे
लेखक/निर्देशक : हेमराज बिसी
कलाकार : निश्चल बस्नेत, स्वस्तिमा खड्का, सुष्मा निरौला आदि ।
विद्या : सोसल ड्रामा, कमेडी
समय : २ घन्टा १५ मिनेट
रेटिङ : २.५/५
प्रकाशित: कार्तिक २२, २०७६
ट्याग: घामड शेरेहेमराज बिसीनिश्चल बस्नेतस्वस्तिमा खड्कासुष्मा निरौला